တရုတ်ရှေးဟောင်းသောကြေးဝါမီးဖိုချောင်သုံး Faucet၊ သက်ကြီးရွယ်အိုကြေးဝါမီးဖိုချောင်သုံး Faucet၊
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet,အသက်ကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet,ကြေးဝါမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ,ကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရှေးဟောင်းကြေးဝါရေချိုးခန်း Faucet > ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet
ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet, အသက်ကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကြေးဝါမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
7-shaped brushed ရွှေမီးဖိုချောင်သုံးရောနှော faucet
ဥရောပလူပျိုလက်ကိုင် Crystal ရှေးဟောင်း Faucet
ကုန်းပတ်တစ်ခုတည်း Lever နစ်မြုပ် Faucets တပ်ဆင်ထားသည်
အနက်ရောင်ပန်းကန်ကြေးဝါ Faucets နစ်မြုပ်ရောနှော
ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet အနက်ရောင်
နေရာလေးကိုရဲ့မီးဖိုချောင်ရောနှော faucet အရည်အသွေးမြင့်ကျန်းမာသောကြေးဝါပစ္စည်း လုပ်. ဆွဲငင်အား-ပေါင်းစည်းသတ္တုများပုံသွန်း, ချေး-ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းမလွယ်ကူသောသံချေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, အကို arc-ပုံထွက်ပေါက်ပိုက်အဝတ်လျှော်ဟင်းလျာများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေသောလှည် 360 ဒီဂရီရှိနိုင်ပါသည်။...
Handy's Red bronze နှစ်လက်ကိုင် မီးဖိုချောင်စုပ်စက်ရောနှောသောဘောင်းဘီ များသည်ဥရောပပုံစံပုံစံ retro ပုံစံနှင့်အဓိကကိုယ်ထည်နှင့်ရိုးရှင်းသော်လည်းအနုပညာအရသာပြည့်ဝသည့်ဘားပုံစံနှစ်မျိုးဒီဇိုင်းရှိသည်။ ဒီ ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet ကြေးနီဒြပ်ဆွဲအားနိမ့်ခဲသတ္တုများကိုသာအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ပစ္စည်းသည် Burrs မပါ ၀...
ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet H59 ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရှေးဟောင်းကြေးနီမီးဖိုချောင် faucet ၏အဓိကကိုယ်ထည်သည် ၈ မှ ၁၂ မိုက်ခရွန်အထိဖြစ်သည်။ အပူနှင့်ရေအေးအတွက်သီးခြားလုပ်ဆောင်ထားသောကြွေထည်တစ်ခု။ နှိုက်သည် ၃၆၀ ရှိနိုင်သည် °ဆုံလည်။ ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင်ရေပိုက် များ၏တန်ဖိုးသည် သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ Handy...
ရှေးဟောင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်ဆုံလည် Two-Handles Brass Kitchen Faucet Handy အမှတ်တံဆိပ် Antique Two-Handles ကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet သည်တရုတ်၊ Guangdong မှဖြစ်ပြီး faucet ထုတ်လုပ်သည့်isရိယာဖြစ်ပြီးဥရောပ၊ အမေရိကသို့အဓိကတင်ပို့သည်။ H59 ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဂန္ထဝင်မီးဖိုချောင် Faucets ၏အဓိကကိုယ်ထည်သည် ၈ မှ ၁၂...
မီးဖိုချောင် Faucets များကိုမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်များနှင့် Cold Kitchen Taps များအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်အင်တုံနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပါကမီးဖိုချောင် အတွက် Handy's G အဟောင်း ရေပိုက်၏ထွက်ပေါက်ပိုက်သည်အလျားလိုက် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။ B ၏ တွန်းအားပေးသောရွှေမီးဖိုချောင်...
ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင်ရေပိုက် များ၏တန်ဖိုးသည်သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ Handy အမှတ်တံဆိပ် Antique bronze faucet သည်တရုတ်၊ Guangdong မှဖြစ်ပြီးဥရောပ၊ အမေရိကသို့အဓိကတင်ပို့သည်။ Faucet ၏အဓိကကိုယ်ထည်ကို H59 ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး electroating အထူသည် ၈ မှ ၁၂ မိုက်ခရွန်အထိရှိသည်။...
လွယ်ကူသော ၇- ပုံပါသော ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေရောင် မျက်နှာပြင် မီးဖိုချောင်သုံးရောနှော faucet ပိုးအမှတ်အသားများကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ 7-shaped ရွှေရောင် မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထားသောအရောအနှော များ၏ပုံပန်းသဏ္ mirror ာန်သည်ချောချောမွေ့မွေ့သော မျက်နှာပြင်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုခံစားနိုင်သည်။ အထိ5အလွှာ၏...
အိမ်အလှဆင်သည့်အခါကောင်းမွန်သောမီးဖိုချောင်သုံးရောနှောထိပုတ်ပါကအိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ Kitchen Sink Mixer သည်ရေအရင်းအမြစ် switch ၏အရွယ်အစားကိုထိန်းချုပ်ရန်သာမက၎င်း၏အရည်အသွေးသည် ရေအရင်းအမြစ်ပျက်စီးမှုကို ပါအကျိုးသက်ရောက် သည်သာမကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်...
သုံးစွဲသူများကိုကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပေး ရန်အတွက် Handy Single-handle brushed gold kitchen sink mixer faucet သည်အရောင်၊ ပစ္စည်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အလွယ်တကူတပ်ဆင်ထားသောရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေမီးဖိုချောင်စုပ်စက် ၏ဆေးမျက်နှာပြင်သည်...
မူလစာမျက်နှာမီးဖိုချောင်တွင်အအေးနှင့်အအေးခံမီးဖိုချောင်ထဲထည့်ခြင်းလက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးသည်ရှေးခေတ်ကြေးဝါရေချိုးခန်း Faucet၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသောကြေးနီလက်ကိုင်အ ရံအလှဆင်၊ ကြွေထည်မြေထည်ရှိ Retro ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများအာမခံချက်။ အာမခံချက်။ နှစ်ထပ်တိုင်မီးဖိုချောင်ဘောင်းဘီသည် ၁၀၅၈ ဂရမ်ရှိပြီးအမြင့်မှာ ၂၈၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။...
မူလစာမျက်နှာမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါကုန်းပတ်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အပူနှင့်အအေးခံမီးဖိုချောင်ထဲထည့်ထားသောလက်ကိုင်အိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေလက်စွပ်၊ ကြေးဝါခလုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတာရှည်ခံကြေးပြား၊ ကြွေထည်ထဲ၌မီးဖိုချောင်သုံးအရောအနှောထိတွေ့မှုအတွက်ငါးနှစ်အာမခံပါသည်။ လည်ပင်းရှိမီးဖိုချောင်ဘောင်းဘီသည် ၁၀၅၈ ဂရမ်ရှိပြီး၊ ၂၈၀ မီလီမီတာ၊...
အနက်ရောင်ကုန်းပတ်မီးဖိုချောင်ဘုတ်များ၊ ကြေးဝါဆောက်လုပ်ရေးအဓိကကိုယ်ထည်၊ စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်ဘုတ်များ၊ အဆင့်မြင့်အမှတ် ၅၉ အနက်ရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးနီသတ္တုစပ်များပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါမီးဖိုချောင်သုံးပိုက်များ၊ အဖြူနှင့်ရွှေတို့ကဲ့သို့စိတ်ကြိုက်အရောင်များကိုအိမ်ဖြူ၊ မီးဖိုချောင်ဘားဟိုတယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ။ တစ် ဦး...
ခေတ်မီဒီဇိုင်းသောကြေးဝါမီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်များ၊ အိမ်မီးဖိုချောင် taps.Commerical ခဲပြားတစ်လုံးတည်းဖြင့်မြင့်မားသောစီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်များကိုကိုင်တွယ်သည်။ ကြေးနီဆောက်လုပ်ရေးအနက်ရောင်သုတ်လိမ်းခြင်းအပြီးသတ်။ ကြွယ်ဝသောလီဗာလက်ကိုင်သည်အဆို့ရှင်နှင့်ဆက်စပ်သည်။...
အနက်ရောင်အရောင်ကြေးဝါမီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်များ၊ အိမ်မီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်များ၊ မီးဖိုချောင် faucet ကြေးဝါအနက်ရောင်ချထားတဲ့ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားသည့်မီးဖိုချောင် taps များ၊ ရေချိုးခန်းဟိုတယ်အိမ်ရှိဘားတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ arc ကုန်းပတ်ရပ်တည်ချက်မီးဖိုချောင်ရောနှောထိပုတ်ပါတပ်ဆင်ထားသည်။...
တရုတ်နိုင်ငံ ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet ပေးသွင်း
ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင်ရေပိုက်များ၏တန်ဖိုးသည်သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည် သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေဟာ faucet body material, brand, ထုတ်လုပ်မှု,ရိယာ၊ spout swivel, cartridge, နံပါတ်နှင့်လက်ကိုင်ဒီဇိုင်း၊ ဆွဲထုတ်ထွက်နှင့် built-in ရေစစ်စက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ရှေးဟောင်းကြေးဝါမီးဖိုချောင် faucet နှင့် retro, country နှင့် classic စတိုင်အတွင်းပိုင်းအတွက်အခြားအသုံးအဆောင်များကိုရွေးချယ်ရာတွင်၎င်းပစ္စည်းများအားလုံး၏စတိုင်၊ အရောင်အရင့်နှင့်အရွယ်အစားစုံလင်မှုရှိရန်သေချာစေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။